Samsung oo madaxweyne cusub u magacawday qaybta guurguura | Androidsis
Samsung, sida sanad walba, waxay ka dhigtaa isbeddelka madaxweynaha qaybta guurguura. Shirkadda Kuuriya wuxuu ku dhawaaqay Roh Tae-moon inuu yahay madaxa muuqda, wuxuu bedelayaa Koh Dong -jin - oo loo yaqaan DJ Koh - wuxuuna ahaan doonaa sii -hayaha guud. Roh waa madaxweynihii ugu da'da yaraa IT -ga iyo qeybta isgaarsiinta isagoo jira 51.
1 Waxay ahayd lambarka 2 ee shirkadda
2 Waxaan ogaan doonaa taleefanno badan oo taxanaha Galaxy ah
3 Galaxy A51 hadda waa la heli karaa
Waxay ahayd lambarka 2 ee shirkadda
roh Wuxuu ka socdaa noqoshada lambarka labaad ee fulinta ilaa madaxa ciyaarta ka hor inta aan lagu dhawaaqin taleefoonnada soo socda ee shirkadda, iyadoo shaqo badan ay hor taallo laba iyo tobanka bilood ee soo socda. Doorka Tae-moon ma aha mid kale oo aan ahayn inuu u istaago Huawei, dhammaantoodna waxaa sabab u ah ballaarinta weyn intii lagu jiray labadii sano ee la soo dhaafay.
Doorka Roh ee bilahaan wuxuu ahaa inuu dib u hawlgeliyo khadkii Galaxy A, isagoo geliyay meel aad uga fiican kana fogaaday hoos u dhaca waqti ka hor. Hadda waa mid ka mid ah khadadka leh tusmada iibka ugu fiican iyo Samsung ayaa aad ugu kalsoon inuu hoggaanka qaban doono this January 20.
Wuxuu shaqaale ka ahaa shirkadda weyn ee Kuuriya labaatankii sano ee la soo dhaafay, sida ku cad warsaxaafadeedka, wuxuu tilmaamayaa inuu leeyahay tayo uu ku dhaqaaqo qaybta taleefanka bilaha soo socda. Waxay ka soo muuqan doontaa muuqaal dadweyne munaasabadda 11 -ka Febraayo oo ay la socoto Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip.
Waxaan ogaan doonaa taleefanno badan oo taxanaha Galaxy ah
Waxaa ka mid ah moodooyinka si loo muujiyo waxaa jira Galaxy A31 iyo Galaxy A41, kan ugu horreeya wuxuu lahaan doonaa 48 megapixel sensor oo weyn, isagoo siinaya boodh tayo leh marka la barbar dhigo Galaxy A31. The Galaxy A41 ayaa sidoo kale ku dari doonta 48 megapixel sensor iyo 2 mpx camera macro.
Galaxy A51 hadda waa la heli karaa
Samsung ayaa horey u sii deysay ugu yaraan mid ka mid ah, Galaxy A51, Galaxy A71 Waxaa laga heli doonaa Janaayo 31 gudaha Spain qiimahiisu yahay ku dhawaad ​​469 euro oo boos celis ayaa durba la furay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay magacowday madaxweyne cusub qeybta mobilada